Lola Woyyaaneen Gujii Lixaatti bante, waan amma (update): – Kichuu
Gujiin, akka Burjiin poolisootaafi hidhattootaa mootummaa Kibbaarraa gargaarsa argataa jiranu gargaarsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa argachuu dhabulle, Burjii loleetuma lolee gara magaalaa Burjii Goochee, Biilaa fi Sooyyamatti galcheera. Magaalonni Burjii kunneen “humna raayyaa ittis biyyaa kan Itoophiyaa” tiin (‘makkalaakkayaan’) eegama jira. ‘Makkalaakkayaa’ lle waan nageya buusu fakkaatee Burjii irra goree Gujii rukutaa jira. Lola higa ammaatti lolamaa jiruun, Gujii irraa namoonni 4 yoo woreegamanu, gama Burjiitiin ammoo namoonni 30 olii ijjeefamaneeran. Miidhaan gama qabeennaatiin gahe ammoo, Gujii irraa manni buuyyoo (citaa) 3 gubateera. Burjii irraa ammoo, manni buuyyoo (citaa) gara 10 gandoota mandara didiqqaa isaanii keessaa gubateera. Kan Burjii Fichaan (maasiin) midhaanii kan akka garbuu, Xaafii, boqqolloo hektaarri 500 olii gubateera.
Via: Daniel Bariisoo Areerii